OTU ESI ETINYE AKARA NA-EZUGHỊ NA EXCEL - EXCEL - 2019
Microsoft Excel abụghị Ihe Nrite
Site n'enyemaka nke ọrụ ụlọ ọrụ Google, ị nwere ike ịmepụta ọ bụghị naanị akwụkwọ ederede na ụdị maka ịnakọta ozi, ma tebụl yiri nke ndị e gburu na Microsoft Excel. Isiokwu a ga-ekwu banyere Google Tables na nkọwa zuru ezu.
Iji malite ịmepụta spreadsheets Google, banye na akaụntụ gị.
Na isi peeji nke Google Pịa akara ngosi anọ, pịa "More" na "Ọrụ Google ndị ọzọ." Họrọ "Tebụl" na ngalaba "Ụlọ na Office". Iji ngwa ngwa gaa na teepu tebụl, jiri njikọ ahụ.
Na window nke meghere, a ga-enwe ndepụta nke tebụl ị mepụtara. Iji tinye ihe ọhụrụ, pịa nnukwu "red" "ọbara ọbara" na ala nke ihuenyo ahụ.
Onye nchịkọta Isiokwu na-arụ ọrụ na usoro yiri usoro ihe omume ahụ. Ngbanwe ọ bụla e mere na tebụl a na-echekwa ya ozugbo.
Iji nweta ihe oyiyi mbụ nke tebụl, pịa "Njikwa", "Mepụta otu."
Hụkwa: Otu esi emepụta ụdị Google
Ugbu a, ka anyị lelee ụzọ isi kesaa tebụl ahụ.
Pịa nnukwu bọtịnụ "Nweta Ntọala" (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye aha okpokoro). N'elu elu nke windo ahụ, pịa "Nyefee ohere site na aka."
N'ime ndepụta ndetu, họrọ ihe ndị ọrụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha enweta njikọ na okpokoro: lee, dezie ma ọ bụ kwuo. Pịa Mechie iji tinye mgbanwe ndị a.
Iji dozie ọkwa dị iche iche maka ndị ọrụ dị iche, pịa "Di elu".
Ị nwere ike izipu njikọ na okpokoro n'elu ihuenyo ahụ maka ndị niile nwere mmasị. Mgbe a na-agbakwụnye ha na ndepụta ahụ, ị ​​nwere ike iwepụ ọrụ nke nlele, idezi na ịza ajụjụ n'otu n'otu.
Anyị na-enye ndụmọdụ ka ị gụọ: Otu esi emepụta akwụkwọ Google
Nke a bụ otú ọrụ na tebụl Google si ele anya. Ghọta uru niile nke ọrụ a maka ịmepụta ọrụ ọfịs.